Wadooyinka galo Magaalada Xudur oo laga sifeeyey Kooxda Al-shabaab | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wadooyinka galo Magaalada Xudur oo laga sifeeyey Kooxda Al-shabaab
Wadooyinka galo Magaalada Xudur oo laga sifeeyey Kooxda Al-shabaab
Howgal ay sameeyeen ciidamadda Xooga Dalka Soomaaliya iyo ciidamadda gaarka ah ee maamulka koofur Galbeed ayey ku guuleysteen in ay kooxda nabad diidka ah ee Al-shabaab ka sifeeyaan wadooyinka Galo Magaalada Xudur ee Gobolka Bakool.
In ka badan 20 gaari oo Xamuul ah oo u raran ganacsatada Magaalaa Xudur ee Gobolka Bakool ayaa durbaba soo gaaray magaalada ayagoo si nabad ah kusoo maray wadooyinka soo galo magaalada oo ay horay ugu qabeen dhib aad u farabadan.
Kooxda nabad diidka ah ee Al-shabaab oo caadeystay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay wadada u geli jireen ganacsatada iyo bulshada kale ee isticmaalo Wadooyinka ay ciidamada Dowladda Howlgaladda ka sameeyeen.
Shacabka ku dhaqan Magaalada Xudur ayaa si weyn usoo dhaweeyey howgalka ay ciidamada Dowladda Sameeyeen ayagoo muujiyey rajo wanaagsan.
Previous articleMadaxweynaha Turkiga oo la filayo in uu safar xal raadin ah ku bixiyo Wadamada Khaliijka
Next articleDowladda Soomaaliya oo soo saartay Warsaxafadeed ay uga hadlayso Maxaabiista Muqdisho la keenay